ရွှေနိုင်ငံ: မူဆယ်တွင် တရားမဝင် ငွေလဲလှယ်သူ တစ်ဦး ကျပ်သန်း ၇၀၀၀ ခန့်လိမ်၍ ထိုင်းသို့ထွက်ပြေး
မူဆယ်တွင် တရားမဝင် ငွေလဲလှယ်သူ တစ်ဦး ကျပ်သန်း ၇၀၀၀ ခန့်လိမ်၍ ထိုင်းသို့ထွက်ပြေး
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် မူဆယ်မြို့တွင် တရားမ၀င်ငွေကြေးလဲလှယ်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ငွေကျပ် သိန်းခုနစ်ထောင်ခန့် လိမ် လည်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြောင်း မူဆယ်မြို့မရဲစခန်းမှ သတင်းရရှိသည်။
““ငွေလိမ်ခံလိုက်ရသူတချို့ ရဲစခန်းကိုလာအကြောင်းကြားလို့ ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သူအချို့ကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ အဓိက သံသယရှိသူကတော့ ထိုင်းဘက်တိမ်းရှောင်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်”” ဟု မူဆယ်မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ငွေလိမ်လည်၍ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသူမှာ မူဆယ်မြို့ နာရီစင်အနီးနေ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီး တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏မိဘများနှင့် သွားရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့သော်လည်း အဆင်ပြေမှုမရခဲ့ကြောင်း ငွေကျပ် သိန်းခုနစ်ရာခန့် လိမ်လည်ခံခဲ့ ရသည့် နမ့်ခမ်းမြို့မှ ကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောသည်။
တရုတ်ကုန်သည်များနှင့် အဓိကအရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည့် မြန်မာကုန်သည်များက မူဆယ်မြို့တွင် ယွမ်နှင့်ကျပ်ငွေ အလဲ အလှယ်ပြု လုပ် ရန် ငွေပေးချေလေ့ရှိပြီး ယခု ငွေလိမ်လည်မှုဖြစ်စဉ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် နမ့်ခမ်းမြို့နှင့် ရန်ကုန်မြို့မှ ကုန်သည်အချို့ လိမ်လည်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မူဆယ်မြို့ခံကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောသည်။ ““တရားမ၀င် ငွေကြေးလဲလှယ်တဲ့သူတွေယူတဲ့ ၀န်ဆောင်ခက ဘဏ်တွေထက်သက်သာတော့ ကုန်သည်တွေက ယုံကြည်မှုနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြတာ။ အခုလိုဖြစ်တော့ ကုန်သည် အချို့ အခက်အခဲ ဖြစ်ကုန်တယ်”” ဟု အဆိုပါကုန်သည်က ပြောသည်။
ထိုဖြစ်ရပ်ကို မူဆယ်မြို့မရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားခြင်းမရှိဘဲ နမ့်ခမ်းနှင့်ရန်ကုန်မြို့ရှိ သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းများတွင်သာ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 09:40
ဘောလုံးပွဲတွင် ဂိုးဝင်တော့မည်ကို ကြိုတင်အနံ့ခံနိုင...
တရုတ် နိုင်ငံလုပ် သံချပ်ကာ လူသယ် ယာဉ်သစ်များ လက်ခံ...
ဟိုတစ်မျိုးဒီတစ်မျိုး အမျိုးမျိုး ပြောနေကြတဲ့ မြန်...
အမျိုးသမီးများ ဆန္ဒဖြေဖျောက်ခြင်း၏ အကျိုး အသက် (ကျမ...
မြန်မာဟန်းဆန်းအလုပ်သမားများ တောင်းဆိုချက် အလုပ်ရှင...
အာ ဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌရာထူး လက်ခံယူမည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ပြ...
Mobile Team အဖွဲ့မှ တင်သွင်းခွင့်မပြုထားသောကုန်ပစ္စ...
လင်မယားချင်းစကားများရန်ဖြစ်စဉ် ဇနီးဖြစ်သူမှ ဓါးဖြင...
လသာမြို့နယ်၌ မီးရှုး၊ မီးပန်း၊ ဗျောက်အိုးများ ဖမ်းဆ...
ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းတွင် ငါးသယ်စက်လှေပေါ် ဂက်(စ်)အ...
ဆင်ကတ်နှစ်ခု ထည့်သုံးနိုင်တဲ့ HTC စမတ်ဖုန်းအသစ်
၀”ထိန်းချုပ်ဒေသတွင် ၂၀၁၄ ဧပြီလဆန်း သန်းခေါင်စာရင်း...
လှည်းကူးမြို့နယ် စိမ်းလန်းမြေပရဟိတကျောင်းက မိဘမဲ့က...
သံတွဲတွင် သီတဂူ ဆရာတော်နှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာရေးခေါင်း...
စစ်ရေးစောင့်ကြည့် ကော်မတီဖွဲ့ဖို့ ကေအိုင်အိုနဲ့အစု...
ဖိုးလပြည့်နဲ့ မိုးစက်ဝိုင်တို့ကြောင့် လူသိများလာတဲ...
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ပြည်သူများအား အိမ်ထောင်...
မြစ်ကြီးနားတွေ့ဆုံပွဲ ပထမနေ့၌ မတရားအသင်းပုဒ်မဖြင့်...
ပခုက္ကူလေဆိပ်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်အဖြစ် အသုံး...
အမိန့်မချနိုင်သေးသည့် နေပြည်တော်အသင်းပြစ်ဒဏ်ကို အယ...
လက်ဗွေဖတ်စနစ်ပါဝင်သည့် HTC One Max ကို အောက်တိုဘာ ...
ကလေးများ၏အခွင့်အရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကြောင့် သံတ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေး အသုံးစရိတ်များကို တိုးမြှင့်...
ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာ၏ အရိုးပြာကို အိန္ဒိယမှ သယ်ဆောင်...
ပြည်လမ်းရှိ မြန်မာ့အသံဝင်းအား ငှားရမ်းခဖြင့်မဟုတ်ဘ...
မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ပေးမှု အမေရိကန...
မြန်မာနိုင်ငံမှ အရပ်အရှည်ဆုံးဖြစ်သည့် ကိုဝင်းဇော်ဥ...
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစိတ် မွေးကြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...
ရူပဗေဒနိုဘယ်လ်ဆုကို ဗြိတိန်နဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံသ...
မူဆယ်တွင် တရားမဝင် ငွေလဲလှယ်သူ တစ်ဦး ကျပ်သန်း ၇၀၀...
မလေးမှ မြန်မာလုပ်သား ၁၇၅ ဦး ပြန်ရောက်
ဆီးဂိမ်းအားကစားသမားများအတွက် အာမခံလုပ်ငန်းများမှ သ...
The Daily Eleven သတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် သတင်းဆေ...
ဒူဘိုင်းမှ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး လူနေအိမ်ရာ
အ၀ါရောင်ရှိသည့် မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်သို့ရောက်ရှိ ငါး...
တရုတ်က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတိုင်မီ ထိုင်ဝမ်ကို ကျူးကျေ...
Sky Net မီဒီယာအား အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သုံးနှစ်အပါအ၀...